सुन तस्करीका मुख्य नाइके माओवादी नेता परे प्रहरीको सूचीमा… – Khabartime
Wednesday December 12, 2018 |
सुन तस्करीका मुख्य नाइके माओवादी नेता परे प्रहरीको सूचीमा…
२७ भाद्र २०७४, मंगलवार ०९:३१ 908 पटक हेरिएको
भदौ २७, काठमाडौं । पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनमा नेकपा माओवादी (केन्द्र) बाट गाउँपालिका अध्यक्ष निर्वाचित राजकुमार पौडेल सुन तस्करीका मुख्य नाइकेका रूपमा प्रहरीको खोजी सूचीमा परेका छन् ।
दुई साताअघि राजधानीको टोखाबाट १४ किलो र जनकपुरबाट १ किलो सुन बरामद हुनेबित्तिकै पौडेल फरार छन् । सुनसँगै पक्राउ परेका पेम्बा शेर्पालगायतको बयान र अन्य स्रोतबाट सुन तस्करीका मुख्य योजनाकारका रूपमा देखिएपछि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले पौडेलको खोजी गर्दै आएको हो । ४० वर्षीय पौडेल उम्मेदवारी मनोनयनको केही दिनअघि मात्र टिकट पाई सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोसी गाउँपालिका अध्यक्षमा लडेका थिए ।
पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादीबाट सांसद जितेका एक केन्द्रीयस्तरको नेताको ठाडो पहलमा टिकट पाएका उनी त्यसभन्दा पहिले नेपाली कांग्रेसका सक्रिय कार्यकर्ता हुन् । सीआईबीले पौडेलबाहेक राजधानीका एक चर्चित सुन डिलर रमेश खड्काको पनि खोजी गरिरहेको छ । ठँहिटीस्थित पसलबाट कारोबार गर्ने खड्काले पौडेलसँग मिलेर चिनियाँ व्यापारीबाट अवैध सुन भित्र्याउँदै आएका हुन् ।
तातोपानी नाका नजिकको फुल्पिङकट्टी गाउँ (हाल भोटेकोसी गाउँपालिका–४) का बासिन्दा पौडेलले उक्त नाकाबाट सस्ता चिनियाँ सामान ओसार्ने सामान्य व्यापारीका रूपमा काम सुरु गरेका थिए । उनको व्यापारिक र सम्पत्ति आर्जनलाई जानकारहरूले असामान्य मान्दै आएका छन् । उनी हिमालपार ट्रक तथा कन्टेनर व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्षसमेत हुन् ।
टोखामा १४ किलोसहित पक्राउ परेका पेम्बा शेर्पाले सुन तस्करी सन्जालमा पौडेलका लागि काम गर्दै आएको खुलेको छ । दीपेन्द्र थापा र सरोज थापाचाहिँ खड्काका लागि काम गर्ने ‘भरिया’ हुन् । पौडेल र खड्का दुवैको प्रत्यक्ष र निरन्तर सम्पर्क चिनियाँ व्यापारीसँग भएको देखिन्छ । ‘तीमध्येकी एक चिनियाँ महिला नियमित नेपाल आउजाउ गर्छिन् र आत्मविश्वासी पाराले नेपाली पनि बोल्छिन्,’ सीआईबीका एक अनुसन्धान अधिकृत भन्छन् । ती महिलाको पूर्ण विवरण सीआईबीले पाइसकेको छ।’
वैध सुन व्यापारको आवरणमा अन्तर्राष्ट्रिय तस्करीमा सक्रिय खड्का यसअघि प्रहरीको शंकास्पद सूचीमा परिसकेका व्यक्ति हुन् । उनी पहिले तातोपानी, हाल केरुङ नाकाबाट सुन ओसार्नेबाहेक दुबईमा रहेर नेपालमा सुन पठाउने गिरोहसँग पनि नजिक रहेको स्रोतको दाबी छ । ‘उनको भारतमा तस्करी च्यानलसँग राम्रो सम्बन्ध रहेको हुन सक्छ,’ एक अनुसन्धान अधिकृत भन्छन् ।
पौडेल र खड्काले पछिल्लो पटक कुल २२ किलो सुन भिœयाएकामा १५ केजी मात्रै फेला परेको थियो । बाँकी स्थानीय बजारमा खपतका साथै भारत पठाइएको भन्ने पक्राउ परेकाहरूको बयानमा उल्लेख छ ।
सीआईबी अपरेसनको केही दिनपछि राजधानीमा ८८ किलो सुन बरामद भयो । महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाबाट भएको यो बरामदी इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो परिमाण हो । तर, उक्त प्रकरणमा प्रहरी अनुसन्धान भरियाका रूपमा प्रयोग भएका ड्राइभरलाई पक्राउ गर्नेबाहेक थप चरणमा अगाडि बढ्न सकेको छैन।
खासाबाट उपभोग्य सामान, लत्ताकपडा आयात गर्दै क्यारिङको काम गरेका पौडेल समय क्रममा रक्तचन्दन, सुनको धन्दामा यति धेरै अगाडि बढेको देखेर चिन्नेहरू आश्चर्यचकित छन् । ‘हुनत उनी चुनावमा ३ करोड रुपैयाँ खर्च भयो भन्दै थिए । सामान्य कमाइले त्यस्तो गर्न कसरी पो पुग्नु ? ‘ एक पूर्व खासा व्यापारी भन्छन्, ‘खर्चपर्चबाहेक उनको राजनीतिक पहुँच पनि गजबकै थियो।’
‘अनुसन्धान भइरहेकाले अहिले व्यक्ति किटान नगरौं’, सीआईबी प्रमुख डीआईजी पुष्कर कार्कीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘सुन बरामद प्रकरणमा अभियुक्तहरू संगठित अपराधलगायत सम्भवतः सबै मुद्दामा तानिन्छन् ।’ -अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक
राजधानीमा दिउँसै प्रहरी र
जुनसुकै प्रकृतिको हिंसा अनुसन्धानमा
पुरस्कार फिर्ता नगरे आन्दोलनको
निर्मला पन्तको पोस्टरः जति
१३ बर्षीय निर्मला पन्तको
सहयोगी मनहरूका समाजद्वारा सहयोग
अाज बालाचतुर्दशीः यस्तो छ यस पर्वकाे हिन्दु शास्त्रिय मान्यता! जानीराखाैं
मन्दिरमा घन्टी राखिएको हुन्छ? यस्तो कारण… जानीराखैं
५ बर्षकि श्रृष्टी अाचार्यकाे यस्तो प्रतिभा! साँच्चै चाँदनीमा नुहाएरै धर्तीमा जन्मिएकि… भिडियो सहित
राजधानीमा दिउँसै प्रहरी र कुख्यात डाँका बीच गोली चल्यो
ईपिएल क्रिकेटको दोस्रो संस्करण काठमाडौंमा, विदेशी खेलाडीहरू नेपाल अाउँदै…
अमितको गीत सुनेर तारिफ गरे संगीतकार अर्जुन पोखरेलले, इन्दिराले मुस्कुराएर दिइन् बधाई (भिडियो)
झुक्काएर मलाई १२ वर्षमै बिहे गरिदिए भन्दै मिडियामा फेरी अर्की भाईइरल युवती रुदै छोरा सहित
नेपाल सामुदायिक हस्पिट्ल निर्माणको लागि इशाले गरिन १ लाख सहयोग : भिडियो सहित
श्रृङ्खलालार्इ मिस वर्ल्ड जिताउने लागे परिवार सबै चीन तर्फ…. भिडियो हेर्नुहाेस
को हुन् २० बर्षिय अबिन भो? जसको नाम मिस वर्ल्डबाट शृंखलाले हरेक पटक लिन्छिन ?